Manisa Ny Maty i Rosia Rehefa Midaroka Baomba an’i Grozny ny Mpitolona · Global Voices teny Malagasy
Manisa Ny Maty i Rosia Rehefa Midaroka Baomba an'i Grozny ny Mpitolona
Voadika ny 08 Desambra 2014 23:06 GMT
Fitazanana Ny heverina fa daroka baomba mahazo ny Dom Pechati ao Grozny, ahitana ireo mpitolona tsy fantatra isa ataon'ny polisy sy miaramila ao an-toerana fahirano. YouTube. 3 Desambra 2014.
Anjakan'ny ady mahery vaika eo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy mpitolona mitam-piadiana ny araben'i Grozny, renivohitr'i Chechnya. Polisy manampahefana dimy farafahakeliny no namoy ny ainy, nipoaka tao afovoan'ny tanàndehibe kosa ny fiaran'ny polisy, ary nirehitra sy natao fahirano ny Tranoben'ny “Tranon-gazety'” ao Grozny.
Araka ny filazan'ny sampam-baovao Rosiana Lifenews.ru, ahiahiana ho nanodina fiarakaretsaka telo tao atsimo-andrefan'i Grozny sy nampiasa fiara hakàna ny tanàna ireo mpikatroka. Teny an-dalana hizotra ho any amin'ny toerana nokinendry mbola tsy fantatra izy ireo raha nosakanan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ireo fiara nentin'izy ireo ary nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy, grenady sy fitaovam-piadiana hafa. Nanomboka teo no nipoaka ny herisetra, izay nitarika ny fahafatesanan'ireo polisy maromaro.
Ny filazana fa tonga tamin'ny fiarakaretsaka telo ireo mpitolona ireo dia tsy mifanaraka amin'ireo tatitra hafa momba ny isan'ireo lehilahy mitam-piadiana miady amin'ny polisin'i Grozny amin'izao fotoana. Habaka Rosiana TJournal.ru niresaka tamin'olona nanatri-maso izay milaza fa mpitolona mitam-piadiana 50 eo ho eo no mivezivezy ao amin'ny araben'i Grozny amin'izao fotoana. Araka ny filazan'ny nanatri-maso, milaza ny ankamaroan'ny olona ao Grozny tsy nahomby ny fikasana hanafika ny seranam-piaramanidin'i Grozny, hiandrasana ny fiantsonan'ny fiaramanidina manokan'ny Chechen Mpitarika Ramzan Kadyrov.
Tao amin'ny Twitter, miresaka an-tsipalotra momba ny hafatra am-peo avy amin'ireo mpitolona ny mpisera Rosiana fa 300 no isan'ny lehilahin'izy ireo ao Grozny. Nampakatra lahatsary maivana ireo bilaogera izay mampiseho lehilahy maromaro mingonongonona tsianjery islamika, manohana ny zava-mitranga ao Grozny, mampanantena ny ho faty ao anatin'ny tolona miady amin'ny fahavalon'ny Islamo. Tao anatin'ny adiny iray, nanampy dikantsoratra Rosiana tao anatin'ny lahatsary maharitra roa minitra ireo mpisera YouTube, izay mampifandray ireo mpanafika amin'i Aslan Byutukayev, komandin'ireo Chechen mpikomy ary mpiara-dia amin'ilay Dokku Oumarov, izay mpitarika ny Emirà Kaokazy teo aloha.
Niresaka tamin'ny daholobe tamin'ny fampiasana ny sehatra sosialy ankafiziny indrindra, dia ny Instagram, i Ramzan Kadyrov, izay nilazany tamin'ireo mponin'i Grozny mba tsy hivoaboaka ny trano mandrapahavoafehy ny zavamisy, izay notombanany mialoha fa hifarana ny marainan'ny 4 Desambra. Raha mailaka hanome tsiny amin'ny fanafihana sahisahy tahaka izao amin'ireo vondrona mpitolona mitam-piadiana ivelan'i Chechnya, izay efa napetrak'i Kadyrov ho efa nahàla ireo mpioko, dia nanoratra toy izao izy : “Tsy azonay ahifika ao anaty fiheverana fa mety ho avy any amin'ny faria hafa ireo olona ireo. Tsy misy intsony ny vondrona mitam-piadiana tsy ara-dalàna mahavita hetsika tahaka izao.”
Ireo mpisera Twitter milaza fa monina ao Grozny na efa zatra ireo olona mandefa hafatra mitatitra fisian'ny herisetra sy ny ratra navelany.
Grozny, fampahafantarana avy amin'ny Hopitaly laharana fahasivin'ny Tanàna : maro ireo fatin'ny polisy sy ny hafa voatifitra…
Ao Grozny amin'izao fotoana izao.
Fiara mifono vy miaty fitaovam-piadiana (BTRs) ao Grozny.
Raha miresaka ireo sary mahatalanjona sy resaka “Spartiata 300″ mitolona mitam-piadiana midina aoan-tanàna, dia manjaka tanteraka ny fisavoritahana.
От жителей Грозного поступает самая разная инфа: от “У нас началась война” до “Я ничего не слышал”.
Samy hafa tanteraka ny fampahafantarana avy amin'ny mponin'i Grozny, ahitana hevitra “manomboka ny ady aty” ka hatramin'ny “Tsy nahare na inona na inona aho.”